बाँझोपन समयमै पत्ता लागे समाधान गर्न सकिन्छ : डा. दिप्ती यादव
बाँझोपनबाट बच्न २० भन्दा माथी र ३५ बर्ष भित्रै विवाह गर्दा राम्रो
भदौ २३, २०७६ शोभा धमला
आमा भिमा यादव र बुबा राम प्रसाद यादवको पहिलो सन्तानको रुपमा वीरगजमा २०४१ सालमा जन्मिएकी डा.दिप्ती यादव २०५६ सालमा ज्ञानज्योती स्कूलबाट एस.एल सी उत्तिर्ण भई २००२ मा भारतको केरेलाबाट स्नाकोत्तर गरी छात्रवृतिमा बंगलादेशबाट एम बी. बी. एस गरी एम.एस. चाइना सरकार थेनसिन मेडिकल यूनिभर्सिटीबाट गरेको उनले बताईन ।
बाल्यअवस्था एकदमै सुखमय वितेको र तीन दिदी बहिनी १ भाइको जेठो सन्तानका रुपमा जन्मिएकी दिप्ती बाल्यअवस्था देखि नै डाक्टर बन्ने इच्छा भएको बताइन । प्रसुती गृह थापाथली काठमाडौमा ३ वर्ष सेवा गरी हाल श्रीराम हस्पिटल विर्ताको संचालक हुन । आजको मध्य नेपाल सन्देशको लागी तिनै डा. यादव संग बाँझोपनको समस्या र समाधानको बिषयमा गरेको कुराकानी मानसिक तथा सामाजिक रुपमा पुरुषभन्दा प्राय महिलाहरू नै बढि पीडित भइरहेका हुन्छन् । विश्वमा १० देखि १५ प्रतिशत विवाहित जोडीहरूमा बाझोपनको समस्या देखा परेको र त्यस मध्ये ४० प्रतिशत पुरुष र ६० प्रतिशत महिलामा बोँझोपन हुनाले निसन्तान भएका बताउँछिन स्त्री तथा प्रसुती रोग बिशेषज्ञ डा. दिप्ती यादव । प्राकृतिक रूपमा सन्तानका लागि गर्भधारण गर्न नसक्नु बाँझोपन हो । बाँझोपन हुनुमा महिला वा पुरुषको कमजोर शारीरिक अवस्था र हर्मोन उत्पादनमा कमि हुनाका कारणले हुनसक्छ तर बाझोपनको दोष प्राय महिलालाई दिइने परम्परा अझै समाजमा पाइन्छ । बाँझोपन केवल शारीरिक समस्या मात्र होइन, यो मानसिक तथा सामाजिक समस्या पनि हो भन्ने मत राख्छिन डा. यादव ।
महिलामा डिम्ब बाहिनी नलीमा डिम्ब पाठेघर तिर आउने बाटोमा अवरोध भएमा, रजस्वला महिनावारी चक्र अनियमित हुँदा, पाठेघरमा ट्युमर वा कुनै किसमको चोटपटक भएमा वा चोटपटकको कारण खत बनेको भएमा, एन्ड्रोजिन नामक हर्मोन पुरुषमा हुने हर्मन को मात्रा बढ्ने समस्या भएमा र धेरै मोटो शरीर भएका महिलाहरूमा गर्भ नबस्ने सम्भावना रहेको उनले तर्क गरिन । यौन सम्पर्क गर्दा पीडादायी महसुस गर्ने महिलाहरूमा पनि बाँझोपनको संकेत देखा पर्दछ । त्यस्तै थाइराइडको समस्या भएका महिलाहरूमा पनि बाँझोपनको सम्भावना हुनसक्दछ । अध्ययनहरुले बताए अनुसार १० प्रतिशतमा भने बाँझोपन समस्याका कारणहरु पत्ता लगाउ सकिएको छैन । नेपालमा महिलाहरूमा बाँझोपनको समस्या देखिनुको मुख्य कारण पाठेघरमाबाट अण्डा निष्कासनमा समस्या हुनु हो । महिलाहरुले पटकपटक गर्भ पतन गर्दा पनि पाठेघरमा चोटपटक हुनगइ बाँझोपन हुनपुग्दछ । बाझोपनको समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न उपचारका विधिहरू हुन्छन । त्यसको लागि सम्बन्धित चिकित्कहरुसँग नै परामर्श गर्नुपर्दछ जो चिकित्सकहरुले त्यस सम्बन्धी विशेष तालिम पनि लिएका हुन्छन भन्छिन डा. यादव ।
विवाह पश्चात नयाँ दम्पतीमा सन्तान जन्माउने धेरै इच्छा हुन्छ । तर, उनीहरुले सन्तान जन्माउनको लागि धेरै प्रयास गरेपनि उनीहरु आमाबुबा बन्न सक्दैन । जसलाई बाँझोपन भएको भनिन्छ । जसको कारण बच्चा जन्माउनको पुर्ण रुपमा क्षमता घटाउँछ । बाँझोपन धेरै कारणले हुन्छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो कारण ढिला विवाह गर्नु रहेको छ । डा. दिप्तीका अनुसार २० देखि ३५ वर्ष उमेरका महिलाहरु सन्तान जन्माउनको लागि योग्य हुन्छन् । यदि यो उमेर पछि विवाह भएको छ भने गर्भावस्थामा बढि समस्या हुने गर्दछ ।
१ ) बाँझोपनको बारेमा बताइदिनस् न ?
- बाँझोपन भन्नाले कुनै पनि श्रीमान श्रीमती संगसंगै बस्दा कुनै पनि किसिमको अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्दा १ वर्ष सम्म पनि बच्चा नबस्दा या नरहनुलाई नै बाझोपन भनिन्छ ।
२) बाँझोपन हुने कारणहरु के–के हुन ?
- बाँझोपनको मुख्य कारण भनेको श्रीमान श्रीमती दुवै पक्षबाट हुन सक्छ । ४० प्रतिशत जति पुरुषबाट हुन्छ भने ६० प्रतिशत महिलाहरुबाट हुने गर्दछ । महिनावारीमा गडबडी, पाठेघरमा समस्या, सेतो पानी बग्ने कुनै घटनामा योनीमा चोटपटक जस्ता कारणहरु हुन्छन ।
पुरुषमा कुनै–कुनै भाइरल भएको कुनै घटनामा योनीका भागहरुबाट चोटपटक लागेको छ भने पनि यस्ता समस्याहरु हुन्छन । यदि महिला पुरुष ३५ वर्षको उमेरमा नाघी सकेको छ भने पनि यस्तो बाँझोपनको बढी समस्याहरु देखापर्दछ । मानिस विरामी छन भने उनीहरूको व्यवहारिक जीवन खुशीयाली छैन । श्रीमान श्रीमती सँगै बस्नका लागि खुसी छैनन् भने पनि बाँझोपन हुने गर्दछ ।
३) कुन उमेर समुहका ब्यक्तीमा बाँझोपनको समस्या बढी देखिने गरेको छ ?
- उमेरकै कारणले मात्रै बाँझोपन हुने गर्छ भन्न त खासै मिल्दैन । कतिपय श्रीमान श्रीमतीहरु २१ र २२ बर्ष उमेरका हुन्छन् उनिहरुको पनि बच्चा नहुने गरेको भेटिएको छ । अरु धेरै कारणहरु पनि हुने गर्दछ्न । उमेर कै कुरा गर्नुपर्दा ३५ बर्ष नाघे पछि अलि बढी बाँझोपनको समस्या देखा पर्ने गरेको पाइएको छ ।
४) बाँझोपनका के कस्ता प्रकारको हुन्छन् ?
- यदि कुनै महिला पुरुष कसैले पनि रक्सी चुरोटको सेवन गर्छन भने उनिहरुमा बढी देखिन्छ । महिलालाई महिनावारीमा गडबडी हुने अण्डकोषमा समस्या हुने कारणले गर्दा बाँझोपन हुनेगर्दछ ।
५) समाधानका उपाँयहरु के के छन ? अहिलेसम्म कति जनाको उपचार गर्न सफल हुनु भयो ?
- पुरुषहरूको धातुको जाँच गरिन्छ । महिलाहरूको पनि हर्मोनहरु जाँच गरी पाठेघरमा समस्या छन् कि छैनन् जाँच गरिन्छ । अण्डकोषहरुको समस्या महिला र पुरुष दुवै जनाको जांच गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीमान श्रीमती जसमा कमजोरी देखापर्छ उसैबाट उपचार शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचार मेडिकल र सर्जिकल दुवै किसिमका हुन्छन् । पहिले त मेडिकल तिरबाट नै उपचार गरिन्छ । आहिले सम्म हामीले लगभग ६–७ जना जोडीहरुको उपचार गरिसकेका छाँै । यसबाट राम्रो रिजल्ट पनि पाएका छौ । बढी गरेर वीरगंज छेउछाउकै ग्रामीण भेगबाट र बारा जिल्ला तिरबाट नै बढी बिरामी हरु आउने गरेका छन ।
६) बाँझोपनबाट बच्न के गर्नुपर्दछ ?
- समयमा अथवा उमेरमा नै विवाह गर्नुपर्छ । समय भन्नाले सानै उमेरं होइन । २० बर्ष भन्दा माथी गएर विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ । विवाह पछि पनि समयमा नै बच्चा जन्माउने योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ । आजकल बढी कामको बोझ र मानिसहरु व्यस्त भएको कारणले गर्दा आफ्नो जिवनमा त्यति समय दिन नपाएर पनि बढी मानिसहरुले दुख भोग्नु परेको छ । समयमा नै उपचार गराएर चिकित्सकसंग सल्लाह लिन सक्यो भने समस्याको समाधान हुन्छ ।
#बाँझोपन समस्या र निदान
सोमवार, भदौ २३, २०७६, ०७:०९:००
जेठ २५, २०७७ शोभा धमला
जेठ २०, २०७७ शोभा धमला